Delta Air Lines: Ny mpiasa tsy vita volo rehetra dia ampandoavina $ 200 fanampiny ho an'ny fiantohana ara-pahasalamana isam-bolana
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Delta Air Lines: Ny mpiasa tsy vita volo rehetra dia ampandoavina $ 200 fanampiny ho an'ny fiantohana ara-pahasalamana isam-bolana
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao • Vaovao isan-karazany
Tale jeneralin'ny Delta Air Lines Ed Bastian
Tato anatin'ny herinandro vitsivitsy taorian'ny niakaran'ny volan'ny B.1.617.2, ny mpiasa ao amin'ny Delta rehetra izay nampidirina hopitaly niaraka tamin'ny COVID dia tsy vita vaksiny feno.
Delta handoavana vola fanampiny ho an'ny mpiasa tsy vita vaksiny ho an'ny tombontsoa ara-pahasalamana.
Manomboka amin'ny 1 Novambra ny politika fiantohana ara-pahasalamana vaovao an'ny Delta.
Ny salanisan'ny fijanonan'ny hopitaly ho an'ny COVID-19 dia mitentina $ 50,000 isaky ny olona Delta.
Nanambara ny Delta Air Lines androany fa ny mpiasa fiaramanidina rehetra izay tsy vita vaksiny tanteraka amin'ny COVID-19 dia mila mandoa $ 200 isam-bolana fanampiny ho an'ny fiantohana ara-pahasalamana.
Ny fampahatsiahivan'ny CEO an'ny Delta Air Lines ho an'ny mpiasa dia nilaza fa “ilaina ny fandoavana vola fanampiny mba hialana amin'ny risika ara-bola raisin'ny fanapahan-kevitra tsy hanao vaksiny ho an'ny orinasanay.”
Araka ny Ny lehiben'ny mpanatanteraka Delta Ed Bastian , ny "salanisan'ny fijanonan'ny hopitaly ho an'ny COVID-19 dia nitentina $ 50,000 isaky ny olona Delta" ary "tato anatin'ny herinandro vitsivitsy taorian'ny nisian'ny fiovana B.1.617.2, ny mpiasa ao amin'ny Delta rehetra izay nampidirina hopitaly niaraka tamin'ny COVID dia tsy vita vaksiny feno."
Na dia 75% amin'ny Delta Air-dalana, vaksiny miady amin'ny viriosy ny mpiasa, hoy i Bastian fa ny "herisetra" an'ny variana Delta COVID-19 "dia midika hoe mila mahazo vaksiny betsaka amin'ny olona isika, ary manakaiky ny 100 isan-jato raha azo atao."
Ny fanovana dia hanomboka amin'ny 1 Novambra, raha ny 12 septambra kosa dia tsy maintsy mandray fitiliana COVID-19 isan-kerinandro ihany koa ireo mpiasa tsy vita volo. Ireo mpiasa tsy vita volo dia tsy maintsy manao saron-tava ao an-trano ihany koa.
Nifangaro ny fihetsiky ny daholobe sy ny indostria manoloana ny fanapahan-kevitr'ilay kaompaniam-pitaterana an'habakabaka. Ny sasany nidera ny fanapaha-kevitr'i Delta, nilaza fa fomba iray "mety" hamporisihana ny fanaovana vaksiny io ary mety hitondra "fiovana tena izy."
Ny sasany kosa, nampitandrina fa mety hametraka ohatra ratsy milaza fa ny fitsiriritana dia miankina amin'ny fitiavam-bola, fa tsy ny fiahian'ny besinimaro.
Ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka hafa, ao anatin'izany ny United Airlines, Air Canada ary Qantas any Australia, dia manao vaksiny manohitra ny COVID-19 ho an'ny mpiasa.
Tamin'ny fiandohan'ity volana ity dia nilaza tamin'ny mpiasa ny CEO CEO Kir Kirby sy ny filoham-pirenena Brett Hart fa, na dia fantatr'izy ireo aza fa tsy hanaiky ny fanapahan-kevitra ny mpiasa sasany, “milamina kokoa ny rehetra rehefa vita vaksiny ny tsirairay.”